Ilhan Cumar oo raali gelin ka bixisay hadal ay ku soo qortay barteeda Twitter-ka - Halbeeg News
Ilhaan Cumar wax ay wajahday faquuq ku saleysan xijaabjeeda Xuquuqda: Online
WASHINGTON (HALBEEG)- Ilhaan Cumar oo ah wakiil Somaali-Mareykan ah oo laga soo doorto magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka, ayaa raalli gelin ka bixisay hadal ay ugu hadashay saameynta ballaaran ee guddiga arrimaha dibadda Mareykanka iyo Israaa’iil uu ku dhex leeyahay siyaasadda Mareykanka.
Ilhaan ayaa dhawaan dib u faafisay qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku qoray wariye lagu magacaabo Glenn Greenwald kaas oo u qornaa “Waxaa la yaab leh sida siyaasiyiinta Mareykanka ay waqti badan ugu bixinayaan difaaca dowlad shisheeye(Israa’iil) xitaa hadii la weeraro xuriyadda hadalka ee qof Mareykan ah” Ilhaan ayaa sii raacsatay hadalka wariyaha “Waxaas oo dhami waa ilmaha Benyamiin”.
Tifaftire ka tirsan wargeyska Forwad Newspaper ayaa yiri “Wax aan jeclaan lahaa inaad ogaataan dadka ay umaleyso Ilhaan Cumar in ay lacag ku bixiyaan taageerada Israa’iil, waa wax aad u xun inuu hadalkan ka soo yeero wakiil, waa markii labaad oo ay dib u faafiso hadallo looga soo horjeeddo saamiyadda(nacaybka Yuhuudda)” Ilhaan oo ka jawaabaysa hadalka tifafrtiraha ayaa si kooban u tiri waa “AIPAC!” oo ay ula jeeddo waxaa lacag ku bixiya guddiga arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Israa’iil.
Muddo markii hadallaadaasi la isku weydaarsaday Twitter-ka ayay Isniintii la soo dhaafay Ilhaan waxay raalli gelin ka bixisay hadalkeedii waxayna tiri “Weey jirtaa cadaawadda loo oo hayo Saamiyadda, anigana wax aan abaal weyn u hayaa saaxiibadeeyda yahuudda ah ee iiga sheekeyn jiray xasuuqii lagula kacay yuhuudda”.
Madaxweyne Trump oo isna ka hadlay arrinka Ilhaan ayaa ugu baaqay in ay iska casisho xilka wakiilnimo maadaama ay qortay hadal liddi ku ah saamiyada.
Wakiil Kildee oo ay ilhaan ka wada tirsanyihiin golaha ayaa difaacay aragtida Ilhaan isaga oo sheegay in hadalkeeda uusan liddi ku aheyn saamiyadda ama yahuudnimada.
“Aniga uma fahmin in looga soo horjeedo saamiyadda” wakiil Kildee ayaa sidaa u sheegay telefishinka CNN.
Kildee oo laga soo doorto Mishigan ayaa sheegay in Ilhaan ay dooneysay kaliya in ay toosh ku ifiso xaqiiqada ah in ay jiraan siyaasiyiin qaaraan u uruuriya taageeraha siyaasadda Israa’iil.
Ra'iisul wasaare Kheyre oo tababar usoo xiray ciidamo sugaya ammaanka Muqdisho
Golaha wasiirrada KG oo la soo dhameystiray